Bit By Bit - गोपनीयता र सहमति नीति
गोपनीयता र सहमति नीति
डिजिटल युग मा सामाजिक अनुसन्धान कुनै मूल्य मा उपलब्ध: यो वेबसाइट मा, हामी बिट द्वारा बिट को पूर्ण पाठ गर्दै छन्। तपाईं पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ गर्दा, हामी समग्र पाठक व्यवहार नाप्ने गरिन्छ। उदाहरणका लागि, हामी जो पुस्तकको खण्डहरू अक्सर पढ्न प्राप्त नाप्ने गरिन्छ। यो डाटा हामीलाई पुस्तक सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ। हामी पनि प्रयोगहरू-सामान्यतः भनिन्छ चलिरहेका छन् एक / बी परीक्षण हामीलाई पुस्तकको थप प्रतिहरू बेच्न सहयोग गर्न --उत्पादन। सबै हामी गरिरहेका छन् आधुनिक वेबसाइटहरूमा सामान्य छ। हामी तल थप विस्तार यसलाई वर्णन, र हामी मा सिकेको कुरा हामी गरेका र के चित्रण हुनेछ हाम्रो ब्लग ।
हामी प्रयोग Google विश्लेषण तपाईं यो वेबसाइट अन्तरक्रिया कसरी बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्न। यसबाहेक, सबैभन्दा वेबसाइट जस्तै, हामी प्रयोग कुकीहरू आफ्नो अनुभव बृद्धि गर्न, सामान्य आगन्तुक जानकारी भेला र हाम्रो वेबसाइट भ्रमणमा ट्र्याक। कृपया उल्लेख "हामी कुकीहरू प्रयोग गर्छन्?" खण्ड कुकीहरू र हामी कसरी तिनीहरूलाई प्रयोग बारे जानकारी को लागि तल।
हामीले सङ्कलन गर्ने पुस्तक सुधार गर्न, र पुस्तक बेच्न मदत, अनुसन्धान को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ जानकारी को कुनै पनि।
हामी कसरी आफ्नो जानकारी रक्षा गर्छन्?
हामी तपाईं हामीलाई प्रदान गर्ने जानकारी को सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षा उपाय को एक किसिम लागू।
ब्राउजिङ जानकारी को सबैभन्दा हामी भण्डारण भनेर गरेको छ Google विश्लेषण , र तपाईं आफ्नो बारेमा थप पढ्न सक्नुहुन्छ सुरक्षा र गोपनीयता सिद्धान्तहरू ।
तपाईं थप्ने एनोटेशनहरू व्यवस्थित छन् hypothes.is , र तपाईं आफ्नो बारेमा थप पढ्न सक्नुहुन्छ सेवाका सर्तहरू ।
हाम्रो वेबसाइट द्वारा गरिएको हो Github पन्ने , र तपाईं Github बारेमा थप पढ्न सक्नुहुन्छ सेवाका सर्तहरू ।
हो। कुकीज एक साइट वा यसको सेवा प्रदायक आफ्नो वेब ब्राउजर मार्फत आफ्नो कम्प्युटरको हार्ड ड्राइभ गर्न स्थानान्तरण (तपाईं अनुमति भने) आफ्नो ब्राउजर र कब्जा पहिचान र केही जानकारी सम्झना गर्न साइटहरू वा सेवा प्रदायकको प्रणाली सक्षम सानो फाइल हुन्।
अर्डर तपाईं एक राम्रो साइट अनुभव प्रदान गर्न, हामी बुझ्न र आफ्नो प्राथमिकता भविष्य भ्रमणमा लागि सुरक्षित र साइट यातायात बारेमा समग्र डाटा सङ्कलन गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
हामी बेचन छैन, व्यापार, वा अन्यथा बाहिर पार्टीहरूलाई यति लामो समय ती दलहरू यो जानकारी गोप्य राख्न सहमत रूपमा, हाम्रो वेबसाइट सञ्चालन अनुसन्धान सञ्चालन, वा तपाईं एउटा सेवा प्रदान गर्न हामीलाई मदत गर्ने विश्वसनीय तेस्रो दल बाहेक आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान स्थानान्तरण जानकारी । हामी जारी, कानून पालना गर्न हाम्रो साइट नीति लागू वा हाम्रो वा अरूको अधिकार, सम्पत्ति, वा सुरक्षा रक्षा उपयुक्त हो भन्ने विश्वास गर्दा पनि हामी आफ्नो जानकारी जारी हुन सक्छ।
कहिले काँही, हाम्रो विवेकमा, हामी तेस्रो पार्टी वेबसाइटहरु लिंक समावेश हुन सक्छ। यी तेस्रो पक्ष साइटहरू अलग र स्वतन्त्र गोपनीयता नीति छ। हामी, यसैले, कुनै जिम्मेवारी वा यी लिङ्क साइटहरु को सामाग्री र गतिविधिहरु लागि दायित्व छ। तैपनि, हामी हाम्रो साइट को निष्ठा जोगाउन खोजी र यी साइटहरू बारेमा कुनै पनि प्रतिक्रिया स्वागत गर्दछौं।
हाम्रो साइट को उपयोग गरेर, तपाईं हाम्रो गोपनीयता नीति गर्न सहमत।
तपाईं कुनै प्रश्न छ भने, हामीलाई एउटा इमेल पठाउने कृपया info@bitbybitbook.com ।
हाम्रो गोपनीयता र सहमति नीति परिवर्तन
हामी हाम्रो एकमात्र विवेकमा समय समयमा हाम्रो गोपनीयता नीति परिवर्तन गर्न अधिकार छ। गोपनीयता र सहमति नीति को हालको संस्करण समीक्षा गर्न कृपया समय समयमा यो खण्ड जाँच गर्नुहोस्। हाम्रो अघिल्लो सबै नीतिहरू तल प्रस्तुत छ, र हामी कुनै पनि परिवर्तन आवश्यक छ भने यो पृष्ठ अद्यावधिक जारी हुनेछ।